Programme PROSPERERAmbodimangan’i Sahavaviana, Faritra Analanjirofo: miroborobo ny voly katsaka nataon'i RAZAFINDRAMENA Victor mpikambana ao anaty KOPERATIVA TSY LANY TSARA - Programme PROSPERER Ambodimangan’i Sahavaviana, Faritra Analanjirofo: miroborobo ny voly katsaka nataon'i RAZAFINDRAMENA Victor mpikambana ao anaty KOPERATIVA TSY LANY TSARA - Programme PROSPERER
Ambodimangan’i Sahavaviana, Faritra Analanjirofo: miroborobo ny voly katsaka nataon’i RAZAFINDRAMENA Victor mpikambana ao anaty KOPERATIVA TSY…
Ambodimangan’i Sahavaviana, Faritra Analanjirofo: miroborobo ny voly katsaka nataon’i RAZAFINDRAMENA Victor mpikambana ao anaty KOPERATIVA TSY LANY TSARA
Fambolena katsaka no antom-piveloman’Andriamatoa Victor izay monina ao Ambatovaky, Kaominina Maromitety, Distrika Vavatenina. Voly katsaka misaritaka no nataony hany ka tsizarizary ny vokatra azo. Raha velaran-tany 1,2ha no niasana tamin’izany, katsaka 800kg monja no vokatra. Tsy nahafantatra ny fomba entina hamelarana ny asa fivelomany ho amin’ny sehatra hafa izy hany ka niantehitra tamin’io voly katsaka io fotsiny ihany.
Ny taona 2015, voatily ho isan’ny mpahazo tombontsoa ho tohanan’ny Fandaharanasa FANOITRA/PROSPERER i Andriamatoa RAFAFINDRAMENA Victor. Nahazo tohana isan-karazany izy ary ny tena nanamarika ny fivoarany dia ny fiofanana momba ny fambolena katsaka ara-teknika. Vokany : ilay voly katsaka 1,2ha nahazoany vokatra 800kg teo aloha dia niakatra ho avo roa heny ka lasa 1,500kg. Isan’ny nahazo fiofanana fanabeazana ara-bola izy ary manana drafitr’asa fampandrosoana ny orinasany. Mpikambana ao anaty Koperativa TSY LANY TSARA ihany koa i Victor.
Nifandray ara-barotra tamin’ny LFL ny KOPERATIVA TSY LANY TSARA ny taona 2017 sy 2018. Tsy nahitam-bokatra izany fifandraisana ara-barotra izany noho ny tsy fitovian-kevitry ny mpividy sy ny mpamokatra teo amin’ny vidy ivarotana. Nanomboka nampiasa ny toro-hevitra azony tamin’ny Fandaharanasa i Victor mba ialana amin’ny fitobahan’ny vokatra. Nitady mpividy vokatra hafa izy ka teraka teo ny fivarotam-bokatra tamin’Andriamatoa CORNELLE monina ao Sahavary. Nifanaraka tsara ny roa tonta, raisin’i mpividy vokatra any Ambatovaky ny vokatra ary tsy nisy olana teo amin’ny vidy ivarotana azy.
Ny taona 2018, voatendry ho filoha lefitry ny Koperativa TSY LANY TSARA i RAZAFINDRAMENA Victor. Manomboka hita taratra fa lasa mpandraharaha matihanina izy. Nizara ny tombontsoa azony vokatry ny fiaraha-miasa tamin’i CORNELLE izy ary nitari-dalana ireo mpikambana namany. Ny taona 2019, nisy ny fifanaovan-tsonia ara-barotra teo amin’ny KOPERATIVA TSY LANY TSARA sy Andriamatoa CORNELLE. Mandeha tsara ny fiaraha-miasa ka katsaka 31 850kg no tafavoaka nandritra iny taom-piotazana 2019 iny. Nahatratra 29 473 000 ariary ny vola nokirakirain’ny Koperativa.
Raha ny amin’ny RAZAFINDRAMENA Victor manokana, tena nanamarika ny fivoaran’ny asa fivelomany ny tohana nentin’ny Fandaharanasa FANOITRA/PROSPERER. Nampitombo velaran-tany iasana izy ka toerana telo no nanaovany voly katsaka ny taona 2019 ary mirefy toy izao :
1,4 Ha ao Bifatsy izay namokatra 1 500 kg
1 Ha ao Andravorombe nahazoana vokatra 1200 kg
1 Ha ao Antoby Morarano produisant 1100 kg.
Efa namidy ny 2 100Kg tamin’ireo vokatra ireo tamin’ny vidiny 1000 ariary ny iray kilao satria mila vola izy ho entina hikarakaana ny voly ho amin’ny taom-pamokarana manaraka. Mbola najanona kosa ny 1 700kg hiandrasana ny fahatsaran’ny vidiny.
Tsy nijanona teo amin’ny famokarana ihany i Victor fa nanangom-bokatra ihany koa. Katsaka 18 400kg no voangona vokatry ny fampiasam-bola nindramina teo anivon’ny mpampindram-bola madinika toy ny PAMF.
Nanao varotra madinika (commerçant) koa izy nanomboka ny 2015 izay azo lazaina tsy dia nahomby ihany. Nivoatra izany ankehitriny satria ny ampahany amin’ny vokatra vokariny dia atakalo kojakoja ilaina amin’ny andavan’andro, ary aterin’ny mpividy vokatra any an-toerana. Efa manodidina ny 20 000 000 ariary ny vola mihodina ao anatin’io varotra io ankehitriny raha tsy nisy afa-tsy 800 000 Ar izy tany am-piandohana.
Ny fanitarana ny asa fivelomany no mahamaika an’i Victor hany ka efa manana lavanila 1000 fototra ary jirofo 250 fotora izy amin’izao fotoana. Efa manana lafaoro hanodinana vovo-katsaka ho lasa mofo ihany koa izy novidiany tamin’iny taona 2019 iny.